Daawo Sawirro Dabaal degga Muqdisho loogu sameeyay sagootinka sanadkii hore iyo soo dhaweynta sanadkaan curdanka ah. - iftineducation.com
Daawo Sawirro Dabaal degga Muqdisho loogu sameeyay sagootinka sanadkii hore iyo soo dhaweynta sanadkaan curdanka ah.
iftineducation.com – Habeenkii xalay ahaa waxaa ka dhacay gobalka Banaadir fantasto cajiib ah, waxaana xafladii ugu wacneyd ay ka dhacday degmada Howl-wadaag halkaas oo ay uga qeyb galeen fantasyada bulashada dhinacyadeeda kala duwan.
Dabaal degaasi dhinacyada ka qeyb galay waxaa kamid ah gudoomiyaha gobalka Banaadir, gudoomiyayaasha degmooyinka Warta Nabadda, Waaberi, Xamar Jajab, taliska ciidanka police-ka gobalka Banaadir, fanaaniin, barbaarta gaashaaman, bulashada dhinacyadeeda kala duwan iy ubaxa degmada Howlwadaag.
Munaasabaadaasi intii ay scotay waxaa lagu soo bandgigay Gabayo, Heeso iyo Riwaayado lagu soo dhaweynayo sanadka cusub laguna sagootinayo sanadkii tegay, waxnaa sidoo kale lagu muujinayay sida degmada Howl-wadaag ay u gaartay horumarka lataaba karo ee ay kutalaabsatay.
Dhamaan masuuliyuiintii munaasabada ka hadashay waxa ay ku amaaneen gudoomiyaha degmada Howlwadaag, Maxamed Abuukar Cali, (Jacfar) qaabka uu horumarka lataaban karo u gaarsiiyay degmadiisa iyada oo ay ugu muhiimsantahay hanaanka uu u qaabilay Suuqa Bakaaraha oo uu kasoo saaray Suuq cajiib ah.
Munaasabada waxaa soo xiray kadib markii uu curtay sanadii lasoo dhaaweynayay gudoomigha Howlwdaag, waxa uuna uga mahad celiyay shacabka degmadiisa qaabka ay uga qeyb qaateen horumarinta degmada isaga oo hoosta ka xariiqay in la’aantood aan cid wax qaba kartaahi aysan jirteen.
Dhacdo murugo leh gabar dishay Aabaheed si ay u qariso fal foolxun oo ay samaynaysay iyo Fadeexad kusoo food laheed